संकुचन गरिएको: प्रस्तुतीकरण प्लेटफर्म जसले तपाईंलाई बेच्न मद्दत गर्दछ Martech Zone
काटिएको बिक्रीको लागि अनुकूलित एक अनलाइन बैठक र प्रस्तुतीकरण प्लेटफर्म हो। वेब ईक्स र गोटोमिटि like जस्ता व्यक्तिहरूसँग सीधा प्रतिस्पर्धा गर्दै, क्रुन्चेडले एक प्रणाली राखेर प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्‍यो जसले बैठक, ट्र्याकिंग र फाईल, प्रस्तुतीकरण वा वेब पृष्ठ मार्फत तपाईंको स्क्रिनको साझेदारीमा केन्द्रित गर्दछ। कसैको लागि डाउनलोड गर्न र सेटअप गर्न सफ्टवेयर छैन ... केवल भेट्नुहोस् र तोकिएको बैठक URL मा जानुहोस्!
क्रन्चेडले निम्न मुख्य सुविधाहरू प्रदान गर्दछ:
भेट्नु - आत्मा-चूसने सफ्टवेयर बिना वेब सम्मेलनहरू सुरू गर्नुहोस्। खाता व्यक्तिगत यूआरएल र सम्मेलन नम्बरको साथ आउँदछ।
जडान गर्नुहोस् - ग्राहकहरु संग अधिक व्यक्तिगत कुराकानी छ। च्याट बाहेक, तपाईं पनि सहभागीको सामाजिक प्रोफाइल र स्थानीय जानकारी हेर्न सक्नुहुन्छ।
वर्तमान - डेक प्रबन्ध गर्नुहोस् र प्रस्तुत गर्नुहोस् वा तपाईंको स्क्रिन साझा गर्नुहोस्। तपाईंको बिक्री टोली प्रस्तुतीकरण साझा र रेकर्ड गर्न सक्छन्!
ट्रैक - ट्र्याकेबल लिंकहरू मार्फत ईमेल प्रस्तुतीकरणहरू, हेर्नुहोस् तिनीहरूलाई कसले पढिरहेको छ र कति समय सम्म
सहयोग गर्नुहोस् - प्रस्तुतीकरणहरू, बैठकहरू, नोटहरू र तपाईंको टीमसँग ईमेलहरू साझा गर्नुहोस् ताकि सबैजना सम्झौताहरू सम्पन्न गर्न मद्दत गर्न सक्दछ
बिक्री टोलीले प्रस्तुतीकरणहरू साझेदारी गर्न सक्दछ र सबै बिक्री कर्मीहरूमा मेट्रिक अवलोकन गर्न सक्दछ। यसले तपाइँको बिक्री टोलीमा उच्च प्रदर्शन र अन्य बीच प्रस्तुती भिन्नताहरू के हुन सक्छ भन्ने बारे विशिष्ट जानकारी प्रकट गर्न सक्दछ।
टैग: सम्मेलन सफ्टवेयरसंकुचितgetomeeting विकल्पबिक्री सफ्टवेयरwebex विकल्प
यो वास्तवमै मेटर गर्दछ: www वा गैर- www